China Biomass Pellet Machine fekitari uye bhizimisi Kingoro
Biomass Pellet Muchina
Flat Die Pellet Muchina
Pellet Kugadzira Line
● Chigadzirwa Chigadzirwa: Nyowani Dhizaina Biomass Pellet Machine
● Type: Rinofa Die
● Muenzaniso: 470/560/580/600/660/700/760/850/860
● Simba: 55/90/110 / 132/160 / 220kw
● Unyanzvi: 0.7-1.0 / 1.0-1.5 / 1.5-2.0 / 1.5-2.5 / 2.5-3.5t / h
● Mubatsiri: Screw conveyor, guruva muteresi, Elektroniki Kudzora Cabinet
● Pellet Saizi: 6-12mm
● Kurema: 3.6t-13t
Imwe Stop Service YeBiomass Pellet Equipment
Isu tinopa seti yakazara ye biomass pellet yekugadzira mutsara. Wood pellet muchina, mashanga pellet muchina, yerabha huni pellet muchina, alfalfa pellet muchina, mhuka yekudya pellet muchina, organic fetiraiza granulator, pamwe nechitubu crusher, huni chipper, sando chigayo, Rotary dryer, musanganisi, bhaketi erevheta, bhandi anotakura uye countercurrent inotonhorera ndizvo zvigadzirwa zvikuru zvatinogadzira.
SZLH660 pellet muchina ndiyo yedu yazvino dhizaini yekutwasuka mhete kufa pellet muchina.Ne 132kw mota, kugona kwemuchina uyu 1.5-2.0t / h uye dzimwe nguva inogona kusvika 2.5t / h Nekuda kwekuita kwayo kwakanaka, inozivikanwa kwazvo pa Hupenyu hwekutapudza hunowedzerwa ka3 kupfuura mamwe mamodheru.Iye roller inotakura inotora yakazvimirira otomatiki jekiseni system.Its kuita kwayo kwakasimba uye hupenyu hwebasa hwakareba.
Rice husk, mashanga, sunflower mbeu goko, nzungu goko uye imwe vise goko Mapazi, hunde, kuhukura, sengere, uye zvimwe zvidimbu zvehuni; Mhando dzese dzezvirimwa mashanga, rabha, samende, grey Slag uye zvimwe zvemakemikari zvigadzirwa, nezvimwewo.
Maawa makumi maviri nemaviri Online Service.
Yese-iyo-nzira-yekutevera sevhisi yakapihwa kubva pakuisa odha kusvika pakuendesa.
Kudzidziswa kwemahara kwekushanda, kugadzirisa uye kugadzirisa kwezuva nezuva.
Tinogona kupa nyanzvi gadhi kuisirwa.
Rimwe gore garandi uye kwese-kwese mushure mekutengesa sevhisi.
Yakasarudzika dhizaini uye kuyerera chati inowanikwa kune vedu vatengi.
Independent R & D timu uye yakaoma & yesainzi manejimendi system.
Pashure: Pellet kurongedza muchina
Zvadaro: Double Shaft chisanganiso
Biomass Wood Pellet Muchina
Nyundo Mill NeDutu, Bindu Wood Chippers, Mhuka Dyisa Pellet Mill, Vachikuya muchina wehuni, Wood Crusher, Bhandi rinotyairwa Hammer Mill,